गफ ! .....: August 2011
गजल : हँसाई हँसाई लोभ्याएर
......नियमित ब्लग लेख्न ईच्छा हुनैपर्ने रहेछ अर्थोक जेसुकै अनुकुल भएर मात्र पनि नहुँदो रहेछ .......
मोति जयन्तिको अवसर छ । उनै यूवाकवि मोतिराम भट्टको सम्झना र सम्मानमा ब्लगमा एउटा गजल चढाएको छु । मोतिले नेपाली माटोमा छरेको नेपाली गजल साँच्चिकै मोतिझैं चम्किएर नेपाली गजलाकाश उज्यालो पारोस् । कामना गर्छु ....!
नभन्नु मलाई लुट्यो कसैले नजिकै आई लोभ्याएर ।
लुट्नेले थाहै नदिई लुट्छन् हँसाई हँसाई लोभ्याएर ।
अचेल कतिले आँसुलाई आँखैमा हतियार बनाउँछन्,
रेट्लान चलाखिले होस गर्नु मोति छल्काई लोभ्याएर ।
जित्नकै लागि कुदिरहेछौ तिमी कतिञ्जेल कुद्न सक्छौ,
जित्ने कोहि छ तिमीलाई पनि खेलाई खेलाई लोभ्याएर ।
धर्ती भिजाउने कामना लिई फेरि पुकार्दा वर्षातलाई,
आकाश तिम्रो छेक्न सक्छन् बादल देखाई लोभ्याएर ।
Posted by दीपक जडित at 5:05 PM2comments: Links to this post
त्यो बेलामा म बिहान बिहान अँध्यारैमा उठेर दौडन जाने गर्थें । लगभग चारपाँच किलोमिटर टाढा रहेको स्कूलसम्म दौडंदै जाने र त्याँहा भेला भएका अरु परिचित अपरिचितहरुसँग फूटबल खेल्ने गर्थें । बिहान छिट्टो उठ्ने भएकोले जोत्ने गोरुलाई बिहानको राति नै घाँस भए घाँस नत्र ढेडीबाट पराल थुतेर हाल्ने जिम्मा हुन्थ्यो मेरो ।
(नोट: यो कथा खसखस डटकमलाई पठाईसकेको छु । अत केहिदिनमा त्यहाँ, मेरो फेसबुक नोटमा र कथाहरु संग्रहित गरिआएको ब्लग कथा बालीमा समेत रहनेछ ।)
Posted by दीपक जडित at 3:21 PM5comments: Links to this post